Lexus ＧＳ (3)
Cars Trading (3)
Car Permit (0)
Home Rental (0)
Home Sale (0)
Multi Effect (7)
Home » Life Style » Shameful Mistake
doremi | Life Style | 2014年1月8日
Written by ငြိမ်း​ချမ်း​အေး / (မိုးမခ)
ဇော်​မျိုး​ထွဋ် (မဇ္ဈိမ​လှိုင်း) နာ​ရေး သ​တင်း​ကို ကြေးမုံ က ဇော်​မျိုး​ထွဋ် (Emperor) ပုံ နဲ့ တင်​သ​တဲ့..။ ဗ​မာ့ စာ​နယ်​ဇင်း ရဲ့ အရည်အသွေး ကို အစ​ကတည်းက နားလည်​ပြီး​သား​ပါ။ ဒါ​ပေ​မယ့် အခု​ခေတ်​လို လူ​မှု​ကွန်ရက်​စာ​မျက်နှာ​တွေ​မှာ ဝါသနာ​ရှင်​တွေ​က ဝမ်းနည်း​တ​ကြီး​နဲ့ အမှတ်တရ ဓာတ်​ပုံ​တွေ တင်​နေ​ကြ​တဲ့ ခေတ်​မျိုး​မှာ ဒီ​လို အမှား​မျိုး ကျူးလွန်​တာ​တော့ တော်တော့်​ကို သောက်​သုံး​မ​ကျ​ကြောင်း ပေါ်လွင်​တယ်။
ပြော​မယ့်​သာ ပြော​ရ​တယ်၊ တကယ်​တော့ အမှား​တွေ၊ အလွဲ​တွေ ဟာ သောက်​တ​လွဲ စနစ် နဲ့ သောက်​တ​လွဲ လူ​တွေ ရာ​စု​နှစ်​ဝက် ကြီးစိုး​နေ​တဲ့ တိုင်း​ပြည်​မှာ အသား​ကျနေ​ခဲ့​တာ ကြာ​ခဲ့​ပါ​ပြီ။
ပိတ်​ဆို့​ထား​တဲ့ တိုင်း​ပြည်​မျိုး​ဆို​တော့ နည်း​နည်း ကမ္ဘာ​နဲ့ စ ချိတ်​မိ​ခါ​စ​တုန်း​က ATM စက် ကို “အလို​အလျောက် စကားပြော​စက်” လို့ စာ​နယ်​ဇင်း က ဘာသာ​ပြန်​ဖူး​ခဲ့​တယ်။ အင်္ဂလိပ်​စာ တ​လွဲ​ပြန်​မှု​တွေ​က အခု​အချိန်​ထိ​လည်း အမြဲ​မ​ပြတ်​ပါ​ပဲ။ ပြော​တဲ့​သူ​သာ အာ​ပေါက်သွား​ပါ​မယ်။
အစစ အရာ​ရာ အားနည်း​တဲ့ တိုင်း​ပြည်​မျိုး​ဆို​တော့.. အလုပ်​သင်​ဆရာဝန် က နှလုံး မှာ အခန်း (၃) ခန်း​ပါ​ကြောင်း ပြော​တယ်။ ကျောင်း က မြန်မာ​စာ ဆရာ​မ​လေး က “စာ​ပုလွေ ရင်​မှာ​ပိုက် လို့” ကို စာ​လေး​ရယ်၊ ပုလွေ​လေး​ရယ် လုပ် စာ​သင်​တတ်​တယ်။
အဲ့​သ​လို တိုင်း​ပြည် က ခေါင်းဆောင် အိမ်ရှေ့မင်း​သား စစ်ဗိုလ်​ကြီး က နိုင်ငံ​ခြား ဟိုတယ် တ​ခု ရှေ့က ပု​ခုံး​ဘား​တွေ​အပြည့်​နဲ့ အပေါက်​စောင့်​ကို အလေးပြု​တယ်။ သူ​တို့​လို ဘား​တွေ အပြည့် ဝတ်​ထား​တော့ သူ့​ခ​မျာ အလေးပြု​မိ​တာ​ပေါ့။ မ​ဆ​လ ခေတ် တ​လျှောက် နိုင်ငံ​ခြား လေ့​လာ​ရေး ခရီးသွား​ခွင့်​ရ​တဲ့ စာရေး​ဆရာ​များ အေး​တဲ့ အရပ်​မှာ မျက်နှာသစ်​ဖို့​ပေး​တဲ့ အငွေ့​တ​ထောင်းထောင်း​ထ​နေ​တဲ့ ရေနွေး​ငွေ့​စိမ် Towel အသေး​စား​လေး​တွေ​ကို ကော်​ပြန့်​လိပ်​မှတ်​လို့ ကိုက်​စား​ကြ​တယ်။
ဆရာ​ဦး​ဝင်​တင် က မ​ဆ​လ ခေတ် သူ​ခေါင်းဆောင်​ပြီး ဥ​ရော​ပ ကို ယဉ်ကျေး​မှု က​ပွဲ အဖွဲ့ ခရီး​ထွက်​စဉ် ကိုယ်​တွေ့​ကြုံတွေ့​ခဲ့​ရ​တဲ့ မိမိ​အဖွဲ့​သား​တွေ​ရဲ့ စိတ်​ဓာတ်​ပိုင်း​ဆိုင်​ရာ စံ​လွဲ​မှု​တွေ​ကို ပြန်လာ​တော့ ဆောင်းပါး ရှည်​ကြီး ရေး​ဖူး​ခဲ့​တယ်။ သူ့​ကို လူ​အတော်​များ⁠များ​လည်း မေတ္တာပို့​ခံ​ထိ​တယ်။ တိုင်း​ပြည် က တံခါး​ပိတ် လိုက်​တော့ အသိ၊ အမြင်၊ အယူ​အဆ တွေ​က တ​လွဲ​တွေ​ချည်း​ဖြစ်​ကုန်​ကြောင်း၊ စီးပွား​ရေး​ကျ​ဆင်း​မှု နဲ့​အတူ ရုပ်​ဝတ္ထု​ပစ္စည်း ရှားပါး​လာ​ပြီး လူ​တွေ​ရဲ့ အမူအကျင့်၊ အတွေး​အခေါ် တွေ ပြောင်းလဲ​သွား​ကြောင်း၊ တန်ဖိုး​ထား​မှု စံ​လွဲ​သွား​ကြောင်း​ကို ဦး​ဝင်​တင် က ပုံဖော်​ရေး​ခဲ့​တယ်။
ရော​မ က တ​ကယ့် နိုင်ငံ​တကာ က​ပွဲ ဇာတ်​ခုံ​ကြီး​တွေ​မှာ မြန်​မာ့​ယဉ်ကျေး​မှု အဖွဲ့ က​ပြ​ခွင့်​ရ​ပေ​မယ့် အဖွဲ့​သား ပညာ​ရှင်​များ​ဟာ အိမ်​အပြန် ဓာတ်​ဗူး လေး တ​လုံး ပါ​ဖို့ အရေး အတွက် အသုံး​စား​ရိတ် ကို ချွေတာ၊ မ​စား​မ​သောက်​ဘဲ နေ​ကြ၊ အား​ပြတ်​ပြီး ဖျားနာ​ကြ ဖြစ်၊ နောက်ဆုံး တကယ် စင်ပေါ်​မှာ တက်​ကတော့ မက​နိုင်​တော့​ကြောင်း​တွေ​ကို ဆောင်းပါး မှာ ဝမ်းပန်း​တ​နည်း​ရေး ထောက်​ပြ​ခဲ့​ဖူး​တယ်။
ဒီ​လို အနု​ပညာ​ရှင်၊ အသိ​ပညာ​ရှင်၊ အတတ်​ပညာ​ရှင် အားလုံး စနစ်​နဲ့​လိုက် မှား​ခဲ့၊ လွဲ​ခဲ့​တဲ့ တိုင်း​ပြည်​မျိုး​မှာ ၉​၀ ခု​နှစ်​များ စစ်​ထောက်လှမ်း​ရေး က ပြည်​သူ့​နား​မျက်စိ စာ​နယ်​ဇင်း လောက ကို ချုပ်​ချင်​တော့ စစ်ဗိုလ်​ပြုတ်​များ၊ အဟောင်း​များ၊ အဆွယ်​အပွား ဆွေတော်​မျိုးတော် တ​သိုက် နဲ့ ဖျက်ဆီး​ခဲ့​တဲ့ ဗ​မာ့​စာ​နယ်​ဇင်း ရဲ့ အဆင့် ဟာ အဖတ်​ဆယ် မ​ရ ဖြစ်​ခဲ့​ရ​တယ်။
ဟိုး​အရင် ဂျာနယ်​တွေ ပေါ်​ဦး​စ မှို​လို​ပေါက်​ချိန် သ​တင်း​ထောက် တ​ယောက် က မန္တလေး​သိန်းဇော် ရဲ့ Azada Gallery ဖွင့်​ပွဲ ကို တက် သ​တင်း​ယူ​တော့ မန္တလေး သိန်းဇော် သွား​ပြီး “ဦး​က အရင် ဘာ​လုပ်​ငန်း​လုပ်​ခဲ့​ပါ​သလဲ” လို့ မေး​သ​တဲ့..။ နိုင်​ငံကျော် ကဗျာ​ဆရာ၊ ဇာတ်မင်းသား၊ အဆိုတော် လည်း စိတ်ပျက်​ပျက်​နဲ့ “ကျုပ် ဇာတ်​က စား​တယ် ဗျာ၊ ဇာတ်​ကစား​တယ်” ဆို​ပြီး ပြန်​ဖြေ​ဖူး​တယ်။
နောက် တ​ယောက်​က​ကျ VCD ထုတ်​ဖို့ Live Show တွေ စ​လုပ်​ကြ​ချိန် မေ​ဆွိ ပွဲ မှာ မြင့်⁠မြင့်​ခင် က နပန်း​ဆံ ဆို​တော့ သ​တင်း​ထောက် အချင်းချင်း ပြော​သ​တဲ့..။ “ဒီ အဖွား​ကြီး​က သီချင်း​လည်း ဆို​တတ်​တယ်နော်..” ဆို​ပဲ..။
ဂျူး ဆို ၉​၀ ခု​နှစ်​များ နှောင်း​ပိုင်း က စ​လို့ စာ​နယ်​ဇင်း သ​တင်း​ထောက်​တွေ ရဲ့ ပေါက်​တတ်​ကရ မေးခွန်း​တွေ ဒဏ်​မ​ခံ​နိုင်​လို့ အင်တာဗျူး ဆို အမြဲ​ရှောင်​တယ်​လို့ ဆို​တယ်။ နိုင်ငံ​တကာ မှာ​လို အင်တာဗျူး အတွက် အချိန်​သတ်​မှတ် ပိုက်ဆံ​တောင်း​ဖို့ ကြံစည်​နေ​ကြာင်း ရေး​ဖူး​တယ်။ အိမ်ထောင် ရှိ​သလား အမေး​ကို မ​ရှိ​ကြောင်း ဖြေ​အပြီး​မှာ “ကလေး​ဘယ်နှစ်​ယောက်​လဲ” မေး​တတ်​သူ​မျိုး​တွေ​နဲ့ တွေ့​မှာ ကြောက်​သွား​ဟန်​တူ​တယ်။ ဒါ​မှ​မဟုတ် ဒါ့​ထက်​ဆိုး​သူ​တွေ​နဲ့ ကြုံ​ဖူး​ခဲ့​လို့ ဖြစ်​မယ်။
ဟို​တရက်​က ဂျာနယ်​တ​စောင်​မှာ နေ​မျိုး​ဝေ က အမြင်​သဘောထား တောင်းခံ​တဲ့ မေးခွန်း​တ​ခု အတွက် ဆဲဆို ဖြေ​ခဲ့​ကြောင်း အပြည့်​အစုံ ဖော်​ပြ​ထား​တာ တွေ့​လိုက်​တယ်။ မေးခွန်း​ကြည့်​လိုက်​တော့ နေ​မျိုး​ဝေ ဆဲ​တာ နည်း​တောင် နည်း​သေး​တယ်​လို့ တွေး​မိ​တယ်။ မေးခွန်း​က “အခု​ခေတ် မှာ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ရှေ့​တန်း​တင်​လွန်း​အားကြီး​နေ​တဲ့ အပေါ်​ဘယ်​လို​မြင်​သလဲ” သဘော​မျိုး မေး​တယ်။ နေ​မျိုး​ဝေ​လို သူ​များ ဘာသာ​သာသနာ ကို မဟုတ်​တ​ယုတ် အယုတ္တအနတ္တ တွေ အချိန်​တိုင်း ပြော​ပြီး အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ကာ​ကွယ်​စောင့်ရှောက်​သူကြီး လုပ်၊ အောက်​လမ်း​နည်း နဲ့ နိုင်ငံ​ရေး​လမ်းဖောက်​နေ​သူ​ကို သွား​ပြီး ဒီ​လို မေးခွန်း​မေး​ရင် ဒီ​လို​မျိုး ပြန်​အဆဲ​ခံ​ထိ​ရ​တာ အဆန်း မဟုတ်​ဘူး။
ဟို ဟာ​သ ပုံပြင်​လို​ပဲ ဆို​ရ​မယ်။ အမေ က ကလေး ကို ဈေး​မှာ ဝက်ဆီ သွား​ဝယ်​ခိုင်း​တော့ ကလေး​က ဈေးသွား ဝက်ဆီ ရှာ​တယ်၊ မ​တွေ့​တော့ ပြန်လာ​ပြီး မ​တွေ့​ကြောင်း ပြော​တယ်၊ အမေ က “ဟဲ့.. နင် မူ​ဆာ​ကြီး ဆိုင်​ကော မေး​ခဲ့​သလား” လို့ ပြန်​မေး​တော့ ကလေး​က “မေး​ခဲ့​တယ် အမေ” ဖြေ​တယ်။ အဲ့​တော့ အမေ က “နင့်.. ရိုက်​မ​လွှတ်လိုက်​တာ ကံကောင်း​တာ​ပေါ့” ဆို​တယ်။ မူ​ဆာ​ကြီး​ဆိုင် သွား​ပြီး ဝက်ဆီ​ရှိ​သလား မေး​တာ ရိုက်​မ​လွှတ်လိုက်​တာ ကံကောင်း​သ​လို အဲ့​သ​လို မေးခွန်း​မျိုး နေ​မျိုး​ဝေ ကို မေး​လို့ အဆဲ​ခံ​ရ​တာ နည်း​တယ် လို့​ပဲ ဆို​ရ​မယ်။
ဖြေ​သူ​ဘက်​က ဆဲ​လွှတ်​တာ​ဟာ မှား​ပေ​သိ စာ​နယ်​ဇင်း သဘော မှာ တ​ယောက်​ယောက် ဆီ​က အမြင်​သဘောထား တောင်းခံ​ရင် လမ်းကြောင်း​မေး​မှု​မျိုး မ​လုပ်​အပ်​ဘူး ဆို​တာ နားလည် လက်ခံ သိ​ထား​ရ​မယ့် အခြေ​ခံ သဘော​ဖြစ်​တယ်။
ဟို​တ​လောက ပြည်​တွင်း စာ​နယ်​ဇင်း ဆောင်းပါး​ရှင် တ​ယောက် စာ​တ​ပုဒ် မှာ တင်​မိုး ရဲ့ ဧည့်သည်​ကြီး ကဗျာ ကို ယူ​သုံး​ပြီး ကဗျာ​ဆရာ အမည် မ​သိ​လို့ ပြော​ပြ​ပါ ဆို​တော့ ကဗျာ​ဆရာ အကို တ​ယောက် ဘုရား တ​ရ​ရှာ​တယ်။ ဆရာ​ကြီး တင်​မိုး​လည်း သူ​တို့ လုပ်​မှ “အမည်​မ​သိ ရှေး​စာဆို” ဖြစ်​ရ​တော့​မယ်။
ဗိုလ်​နေ​ဝင်း ဆက်​စပ် ပုံပြင်​တ​ပုဒ် ဆို​ရင် ဗိုလ်​နေ​ဝင်း က ဒ​ဂုန်​တာရာ ကို ဗိုလ်​တာရာ အမှတ်​နဲ့ “ခင်ဗျား မုဆိုး​ဝတ္ထု​တွေ ရေး​သေး​လား” မေး​သ​တဲ့..။ ဒါ​တော့ သောက်​မြင်​ကတ်​လို့ ပြော​တဲ့ ပုံပြင်​ပဲ ဖြစ်​မှာ​ပါ။ တကယ် ဟုတ်ဟန် မ​တူ​ပါ​ဘူး။ ဘာ​လို့​ဆို ဗိုလ်​နေ​ဝင်း က ဟို​စပ်​စပ် ဒီ စပ်​စပ် စာ​ဖတ်​တတ်​သ​လို၊ မှတ်ဉာဏ်​လည်း အင်မတန်​ကောင်း၊ လူရည်လည် တဲ့ လူ​တွင်ကျယ် တ​ယောက်​ပါ။ အခု​ခေတ် စစ်ဗိုလ်​ကြီး​များ နဲ့ အရည်အချင်း က ဆီ နဲ့ ရေ ကွာ သ​လို ကွာ​ပါ​တယ်။ ဒီ​ခေတ် စစ်ဗိုလ်​ကြီး​များ ဗိုလ်​နေ​ဝင်း ထက် သာ​တာ တ​ခု​ပဲ ရှိ​တယ်၊ အာဏာ အလွဲ​သုံး​စား​လုပ်၊ လက်ဝါး​ကြီး အုပ် ကိုယ်ကျိုး​ရှာ​တတ်​မှု​ပဲ။ ဒါ​တော့ ဆ​ရာ့​ထက်​တပည့် လက်စောင်း​ထက် ကြ​တယ်။
ဒီ​ခေတ် စစ်ဗိုလ်​ကြီး​များ​ရဲ့ အရည်အသွေး ကြည့်ပါ။ သမ္မတ​လုပ်​နေ​သူ က နိုင်ငံ​ခြား သ​တင်း​ထောက် တ​ယောက်⁠ယောက်​က​များ မေးခွန်း​မေး​ရင် အရပ်​ကူ​ပါ၊ လူ​ဝိုင်း​ပါ အမြဲ ဖြစ်​ရ​တယ်၊ အင်္ဂလိပ် စာ​တင် မတတ်​တာ မဟုတ်၊ မြန်မာ​စာ ပါ မတတ်​ကြောင်း ကို ပါ​ရာ​ဖတ် မိန့်ခွန်း​ပြော​ရင် စာ​သံ​ပေ​သံ “သူမ​သည်..” တွေ ဘာ​တွေ အမြဲ​လုပ်​တတ်​တယ်။
ဗ​ဟု​သုတ ကြွယ်​ဝ​မှု​က​လည်း လက်ဖျားခါ​လောက်​တယ်။
အရင်​လ​က​ပဲ ပြန်ကြား​ရေး ဒု​ဝန်ကြီး ဆို​သူ​က ဆရာ​ငြိမ်း ရဲ့ “မန်း​တောင်​ရိပ်​ခို” ကို “မြ​နန္ဒာ” လုပ်​ခဲ့​တယ်။ “ရက်​ရွေး​မ​နေ​ပါ​နဲ့.. ကို⁠ကို​ရယ်.. အသက်​ကလေး​ရယ်.. ရှည်​စေ​လို​ရင်​ဖြင့်..” နဲ့ စ​တဲ့ ဆရာ​တင် ရဲ့ “မြ​နန္ဒာ” သီချင်း သပ်သပ်​ရှိ​ပါ​တယ်၊ ဆရာ​ငြိမ်း သီချင်း နာမည်​က “မန်း​တောင်​ရိပ်​ခို” ပါ ဆို​တာ ခေတ်​အဆက်ဆက် ဆရာ​တွေ အမျိုး​စုံ ရှင်း​ပြ​ခဲ့​ဖူး​တယ်၊ ဒါ​လည်း သောက်​မှတ် က မ​ရှိ​ဘူး၊ မှား​ဆဲ​ပဲ။ ဒါ​တောင် “မန်း​တောင်​ရိပ်​ခို” က စစ်ဗိုလ် ဝန်ကြီး များ ပွဲသိမ်း​ခံ၊ အရက်​ဝိုင်း​နဲ့ မျောက်​လို ကွေး​နေ​အောင် က နေကျ သီ​ချင်းနော်။
အဲ့​သ​လို လူ​တွေ တိုင်း​ပြည် မှာ ကြီးစိုး​ခဲ့​တော့ တီ​ဗွီ​မှာ ကလေး​တွေခေါ် ဉာဏ်​စမ်း​ပြိုင်​ပွဲလုပ်​ရာ​မှာ ကလေး​တ​ယောက် က “မန်း​တောင်​ရိပ်​ခို” သီချင်း ရဲ့ ဂီ​တ​စာဆို နာမည် မေးခွန်း​အတွက် “ရင်​ဂို ပါ” လို့ ဖြေ​တယ်။ ဖြစ်​နိုင်​၏၊ မ​ဖြစ်​နိုင်​၏ အကျိုး၊ အကြောင်း မ​စဉ်း​စားန်ိုင်​မှု၊ အထွေ​ထွေ ဗ​ဟု​သုတ နည်း​မှု​တွေ အတွက် ပညာ​ရေး​စနစ်​အကြောင်း သိ​လို့ နားလည် ခွင့်လွှတ်​ပေး​နိုင်​ပေ​မယ့် မ​သိ​တဲ့ မေးခွန်း​အတွက် ဖြေ​ရာ​မှာ မှန်​လေ​မ​လား​ဟဲ့.. ဆို​တဲ့ စိတ်​နဲ့ ရမ်း​သန်း​ဆို​ရဲ​မှု၊ ပြော​ထွက်​မှု က တိုင်း​ပြည်​ရဲ့ စာ​ရိတ္တ​ပိုင်း​ဆိုင်​ရာ အားနည်း​မှု ကို ပါ ဖော်​ပြ​နေ​တယ်။
“ငါ​နဲ့ မ​ထိုက်တန်​တာ​ကို ငါ မ​ယူ​ဘူး​ဟေ့” ဆို​တဲ့ စိတ်​ဓတ် ဟာ လူ့​အဖွဲ့​အစည်း​မှာ ပျောက်​ကွယ်​နေ​တာ ကြာ​ပါ​ပြီ။ အရာ​ရာ​မှာ အချောင်​လို​စိတ် သာ ဝမ်းနည်း​ဖွယ် ရှင်​သန်​အား​ကောင်း​နေ​တယ်။ ဒါ​လည်း ကလေး​သူငယ်၊ လူ​ငယ်​များ ကို အပြစ်​ဆို​ဖွယ် မ​ရှိ။ လူကြီး​ဆို​သူ​များ ကိုယ်တိုင် ခေတ်​အဆက်ဆက် ကိုယ်​နဲ့ မ​ထိုက်တန်​တဲ့ ရာထူး၊ နေရာ၊ အာဏာ၊ စည်းစိမ်၊ လုပ်​ပိုင်​ခွင့် တွေ မ​တရား အဓမ္မ​ယူ ကြီးစိုး​ခဲ့​တော့ ဒီ​လို လူ​မှု​အဖွဲ့​အစည်း၊ စနစ် ရဲ့ သားကောင် ကလေး​လူ​ငယ် များ စာမ​တတ်​ဘဲ စာ​မေး​ပွဲ​အောင်​ချင်​တာ၊ ဗ​ဟု​သုတ မ​ရှိ​ဘဲ အမှတ်​လိုချင်​တာ​မျိုး​ဟာ ဖြစ်​တတ်​တဲ့ ဓမ္မတာ​ပဲ ဖြစ်​တယ်။
တက္ကသိုလ် ပထမ​နှစ်​တက်​ချိန် အဆောင်​မှာ ဘာသာ​ရပ်​တ​ခု တက်​နေ​တဲ့ မဟာ တန်း​က အကိုကြီး​တွေ​နဲ့ အတူ​နေ​ဖူး​တယ်။ ကိုယ့်​ကျောင်း​မှာ​က​လည်း အဲ့​ဒီ​ဘာသာ​က အဓိက ဖြစ်​တော့ သူ​တို့​ဆီ​က အကူအညီ အများ​ကြီး ရ​ခဲ့​တယ်။ သူ​တို့​အားလုံး စာတော်၊ သဘောကောင်း၊ ဘုရား​တရား ကိုင်း​ရှိုင်း​ကြ​တယ်။ သူ​တို့​နဲ့ နေ​စဉ်​က​ဆို ဘုရား​ကြီး မျက်​နှာတော်​သစ် ကို အပတ်​တိုင်း​လိုလို ရောက်​တယ်။ ဆို​ချင်​တာ​က သူ​တို့​အားလုံး​ဟာ အများ သူ​သူ ငါ​ငါ လို​ပဲ တန်းတူ ပညာ၊ ကိုယ်​ကျင့်​တရား၊ သီလ ရှိ​တယ်။
တရက် သူ​တို့​နဲ့ စကား​ဝိုင်းဖွဲ့​ရင်း အခွင့်အရေး အကြောင်း ရောက်​သွား​တယ်။ တ​ယောက်​က “ငါ​တို့​လည်း အခွင့်အရေး သာ ရ​ရင် အလွဲ​သုံး​စား လုပ်​မှာ​ပဲ၊ ကိုယ်ကျိုး​ရှာ​မှာ​ပဲ၊ အခု​ခေတ် ဗိုလ်​ချုပ်​တွေ​လို ဖြစ်​မှာ​ပဲ၊ ကျောင်း​ပြီး အလုပ်​လုပ်​ရင် ငါ​တို့​လည်း အခွင့်အရေး ရှာ​မှာ​ပဲ” ဆို​တဲ့ သဘော​မျိုး ဆို​တယ်။ “ခိုးစား​မှ နပ်​မှန်​မယ့် စနစ်” အကြောင်း​ကို နားလည် ပေ​မယ့် အဲ့​ဒီ​လို မြိန်​ရေ​ရှက်​ရေ ကြိုတင် ကြံစည် ဆို​တာ ကြား​ရ​တော့ ဆိုလို​ချင်​တဲ့ သဘော​ကို နားလည်​သိ​တိုင် ကိုယ်​နေထိုင်​ရာ လူ့​အဖွဲ့​အစည်း​အတွက် တုန်လှုပ်​ခြောက်​ခြား​သွား​ခဲ့​တယ်။ စာ​ရိတ္တ မဏ္ဍိုင် ယိုင်​ဆင်း မှု​ဟာ တ​ဦး​ချင်း သဘော မဟုတ်​ကြောင်း၊ အခွင့် မ​ရ​လို့​သာ မ​ခိုး​ဘဲ နေ​မယ်၊ ရ​ရင်​တော့ ခိုး​မယ့် လူ အများ​ကြီး ဖြစ်​ကြောင်း ကို အသက် (၁​၈) နှစ် အရွယ် မှာ ကောင်း​ကောင်း သဘောပေါက်​သွား​ခဲ့​တယ်။
ဒီ​လို​နဲ့ တိုင်း​ပြည် ရဲ့ ကဏ္ဍ တိုင်း​မှာ အမှား တွေ သာ တွင်ကျယ်​နေ​ကြောင်း၊ အမှန်​တွေ​က အမှား​ဖြစ်၊ အမှား​တွေ က အမှန်​ဖြစ်​နေ​ကြောင်း၊ အဓမ္မ က ဓမ္မ ကို နိုင်​နေ​ကြာင်း၊ သစ္စာ​တရား က အိမ်​မှာ ဖိနပ်​ကြိုး​ချည်​နေ​စဉ် မု​သာ​ဝါဒ က တိုင်း​ပြည်​အနှံ့ ခရီး​ထွက်​ပြီး​ပြီ ဖြစ်​ကြောင်း​ကို ငယ်​ငယ်ရွယ်​ရွယ်​မှာ ရှင်​သန်​ရာ လူ့​ပတ်ဝန်းကျင်​ကို ကြည့်​ပြီး သင်​ခန်း​စာ ရ​ခဲ့​ရ​တယ်။
မသူတော်​များ ကြီးစိုး ဖျက်ဆီး​ရာ နိုင်ငံ​ရေး စနစ် ပျက်စီး​မှု က​နေ စ​ခဲ့​တဲ့ တိုင်း​ပြည်​ရဲ့ ကပ်​ရောဂါ​ဟာ လူ​မှု၊ စီးပွား၊ ကျန်းမာ၊ ပညာ၊ တရား​ရေး၊ အုပ်ချုပ်​ရေး၊ စာ​နယ်​ဇင်း၊ အနု​သု​ခု​မ​ပညာ စ​တဲ့ အစစ အရာ​ရာ ကို စွဲကပ်​ခဲ့​ပြီး အဖက်​ဖက်​မှာ ကိုယ်​ခံ​အား​တွေ ကျ​ခဲ့၊ ယုတ်လျော့​ခဲ့​ရ​တယ်၊ ချွတ်​ခြုံ​ကျ ခဲ့​ရ​တယ်။ ရုပ် ဝတ္ထု ပစ္စည်း​တွေ၊ အဆောက်အအုံ​တွေ လဲ​ပြို​အပြီး နောက်ဆုံး စာ​ရိတ္တ​ပိုင်း​ဆိုင်​ရာ၊ ကျင့်ဝတ်​ပိုင်း​ဆိုင်​ရာ၊ နာမ်​ပိုင်း​ဆိုင်​ရာ ဆောက်တည်​မှု​တွေ အားလုံး ပြိုလဲ​ပျက်စီး ဖြစ်​ခဲ့​ရ​တယ်။
ဒီ​လို နောက်​ခံ​မှာ ဗ​မာ့ စာ​နယ်​ဇင်း ရဲ့ အမှား​များ​ဟာ အထူး​အဆန်း မဟုတ်​တော့​ပါ​ဘူး။ ဒါ​ပေ​မယ့် လူထု ရဲ့ အသိ၊ အမြင် ကို ဖွင့်​ပေး၊ မြှင့်​ပေး​ရ​မယ့် စာ​နယ်​ဇင်း ဟာ တတ်နိုင်​သ​လောက်​တော့ အမှား​နည်း​အောင် ကြိုးစား​စေ​ချင်​တယ်။ အထူးသဖြင့် အခု​လို ခလုတ်​တ​ချက်​နှိပ်​ရင် အရာ​ရာ ဆို​သ​လို ရှာဖွေ ဗ​ဟု​သုတ တိုးပွား​လို့ ရ​တဲ့ ခေတ်​ကြီး​မှာ၊ နိုင်ငံ​တကာ စံ​နှုန်း၊ စံ​ထား တွေ​ကို အလွယ်​တ​ကူ လေ့​လာ သိမြင်​လို့ ရ​တဲ့ ခေတ်​ကြီး​မျိုး​မှာ ဗ​မာ့ စာ​နယ်​ဇင်း က လူ​ငယ်​များ အလေး​ထား ကြိုးစား မိမိ အရည်အချင်း​ကို မိမိ မြှင့်​ကြ​ဖို့၊ မိမိ ကျင့်ဝတ်၊ သိက္ခာ ကို စောင့်​တည်​ကျ​ဖို့ တိုက်တွန်း​လို​တယ်။
8065 total views,4today
by doremi on 2014年2月6日 -0Comments
တစ်​နေ့​က ‘ဘ​ဂ​ဝါ ယူ​နိုက်​တက်စ်​အက်ဖ်​စီ’ လို့ နာမည်​တပ်​ထား​တဲ့ အီးလ်​မေးလ် တစ်​စောင် ဦး​ပဥ္စင်း​ဆီ ရောက်လာ​ပါ​တယ်။
by doremi on 2014年1月8日 -0Comments
by doremi on 2014年2月7日 -0Comments
လမ်း​ထဲ​သို့ ချိုး​ဝင်​လိုက်​သည်​နှင့် အကင်ညှော်​နံ့​များ​က နှာသီး​ဝ​ကို​လာ​ရောက်​ကျီစယ်​သည်။ ကား​တစ်​စီး​လွတ်​ရုံ​လမ်း​လေး​ထဲ ခင်းကျင်း​ထား​သည့် စားပွဲ​ဝိုင်း​...
by doremi on 2014年3月5日 -0Comments
(Written by: ချစ်​ဝင်း​မောင်) နှစ်​ပေါင်း ၂​၀ ကျော် ကာလ​အတွင်း ကျွန်တော်​နေထိုင်​ရာ အရပ်​သည် မ​ယုံကြည်​နိုင်​လောက်​ဖွယ် အံ့​မ​ခန်း ပြောင်းလဲ​သွား​ခဲ့​သည်။ နေ...
by doremi on 2014年1月27日 -0Comments
Written by ဦးတင်​ဦး (ကျူ​ရှင်) လွန်​ခဲ့​တဲ့​သောကြာနေ့​ည​က ည​စဉ်​သွား​နေကျ​ဆေး​ခန်း​သို့ ရောက်​သွား​သော​အခါ ဆရာဝန်​၏​အိမ်​မှ​ရုပ်​မြင် သံ​ကြား​ဖန်​သား ပြင်ပေါ...
Astrology Business Education guitarist life style Myanmar myanmar business Techonology Traditional World Leader
Myanmar Business (8)
World Leader (2)
Washburn (10 views)
Zoom g3 multi-effect (4 views)
Mavis ( Produce by Ishibashi Music Coporation) (3 views)
Eleven Rack guitar/audio interface (3 views)
Epiphone DR-100 Sunburst (3 views)
DoremiCafe (2 views)
Zoom A3 (Accoustic Multi-effect DI) (2 views)
LAG Guitars (T66DCE) (2 views)
Epiphone Hummingbird Artist Wine Red (2 views)
Lexus ＧＳ Year 2005 Aug Model (2 views)
Doremi Shopping isaregional classified ad listing for Myanmar people.We provide free exchange portal for buyers and sellers.
Zoom g3 multi-effect (197402 views)
Zoom A3 (Accoustic Multi-effect DI) (161634 views)
T.C Electronic G Natural( Accoustic Multi Effect) (161180 views)
Epiphone DR-100 Sunburst (159766 views)
Lexus ＧＳ　Year 2006 March Model (137485 views)
Eleven Rack guitar/audio interface (133237 views)
DoremiCafe (132834 views)
LAG Guitars (T66DCE) (132834 views)
Boss AD-8 (Acoustic Guitar Processor) (131297 views)
BOSS GT-100 (126514 views)
© 2020 Doremi Shopping. All Rights Reserved.
Produced by DoremiCafe Group